Ivon-toerana preferences mailaka sy pejy hanafoanana: fampiasana ny anjara andraikitra amin'ny famoahana | Martech Zone
Nandritra ny herintaona dia niara-niasa tamin'ny orinasa nasionaly tamina kompleks izahay Fivarotana sy fampiharana ny Salesforce sy Marketing Cloud. Tany am-piandohan'ny nahitanay dia nanondro olana lehibe momba ny safidin'izy ireo izahay - izay tena mifototra amin'ny asa.
Rehefa namorona fampielezan-kevitra ny orinasa dia hamorona lisitry ny mpandray ivelan'ny sehatra marketing amin'ny mailaka izy ireo, hampakatra ny lisitra ho lisitra vaovao, hamolavola ny mailaka ary handefa an'io lisitra io. Ny olana amin'ity dia ny fametrahana olana vitsivitsy:
Ny pejy tsy nisoratra anarana dia lisitra marobe niaraka tamin'ny anarana famoahana tsy namana izay tsy takatry ny mpamandrika.
Raha nanindry ilay nisoratra anarana ny fisoratana anarana tao amin'ny mailaka izy, dia namono azy ireo tamin'ny lisitra vao navoaka izy io, fa tsy tamin'ny karazan-tserasera izay noheverin'ilay mpanjifa fa nosoratan'izy ireo. Izany dia fanandraman-javatra mahasosotra ho an'ny mpamandr anao raha manohy mandray mailaka hafa karazana toy izany izy ireo.
Miaraka amin'ny lisitra marobe ao amin'ny pejy fisoratana anarana, ny mpandray dia misafidy ny a master unsubscribe raha tokony ho an'ny karazana ny fifandraisana. Noho izany, very ny mpamaky anao izay mety niraikitra taminao raha tsy nahasosotra anao tamin'ny safidinao izay natao ho an'ny asanao fa tsy noho ny antony manosika sy mahaliana azy ireo.
Fikarakarana ny mpamatsy tolotra mailaka anao
Raha manome tolotra hananganana sy hamolavola ivon-toerana tiany manokana izay traikefa mahatalanjona ireo serivisy CRM mandroso sy mailaka mandroso… ireo serivisy kely kokoa dia hampiasa lisitra fotsiny handaminana ny pejin'ny safidin'ny mpamandrinao na ny pejy famongorana.
Raha tsy afaka mamolavola ny pejin'ny tianao manokana ianao dia mamorona ny lisitra avy amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa ny karazana ny fifandraisana alefanao. Ny lisitra dia mety ho tolotra, fisoloana vava, vaovao, torohevitra sy tetika, fomba ahoana, fanairana, fanohanana, sns. Amin'izany fomba izany, raha tsy te-hahazo tolotra bebe kokoa ny mpamandrika - mety mbola famandrihana amin'ny faritra hafa mahaliana raha teo amin'ny fanesorana ny tenany manokana avy amin'ny lisitry ny tolotra.
Raha atao teny hafa, dia ampiasao amin'ny fomba mety ny endrik'ilay sehatr'asa:
Lists - dia voajanahary lohahevitra ary manolotra ny mpamandrika hisoratra anarana amin'ny karazana fifandraisana manokana. ohatra: Offers
fizarana - dia zana-lisitra voasivana lisitra izay tianao hampiasaina amin'ny fanatsarana ny lasibatra. ohatra: Mpanjifa 100 voalohany
fampielezan-kevitra - dia fandefasana tena amin'ny fizarana iray na maromaro na / na lisitra. ohatra: Fanolorana fisaorana ho an'ny mpanjifa ambony
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha te handefa tolotra ho an'ny olona izay nandany mihoatra ny $ 100 tamin'ny sehatra ecommerce aho tamin'ity taona ity, dia nanao hoe:
Manampy sahan-kevitra, 2020_Nandany, ho an'ny lisitry ny Tolotra.
Import ny vola lanin'ny mpanjifa tsirairay amin'ny sehatry ny mailakao.
Create a ampahany, Nandany 100 mahery tamin'ny taona 2020.
Mamorona ny fandefasako hafatra ho an'ny a fampielezan-kevitra.
Alefaso any amin'ny manokana ny fampielezankevitra ahy ampahany.
Ankehitriny, raha maniry ny hisoratra anarana ilay fifandraisana, dia hosakanana izy ireo Lisitry ny tolotra… Ny fiasa tianay hananana.
Fananganana ivon-toerana fanaovana safidy miankina amin'ny andraikitra
Raha afaka mamolavola sy manangana ivon-toerana tianao manokana ianao izay manolotra traikefa tsara indrindra:
Ampahafantaro ny anjara asa sy antony manosika ny mpanjifa anao ary avy eo atsangano ao aminao ny saina na ny safidin'izy ireo fifandraisana amin'ny mpanjifa sehatra. Tokony hisy ny fampifanarahana amin'ny olona ao anatin'ny fikambanana misy anao.
Volavola a pejy preferences izay natokana ho an'ny mpanjifanao miaraka amin'ny tombony sy fanantenana izay homena ao anatin'io lohahevitra na faritra mahaliana io. Ampifandraiso amin'ny CRM ny pejy tianao, amin'izay ianao manana fomba fijery 360 degre momba ny tombotsoan'ny mpanjifanao.
Anontanio ny mpamandrika impiry maniry ny hifandraisana amin'izy ireo izy ireo. Azonao atao ny mampiasa safidy isan'andro, isan-kerinandro, indroa isan-kerinandro, ary isaky ny telo volana, hanatsarana ny fitazonana ny lisitrao ary hialana amin'ny sosotra amin'ireo mpamandrika fa mandray hafatra be loatra izy ireo.
Ampifandraiso ny sehatra marketing ka ireo lohahevitra ireo dia natao ho lisitra manokana ahafahanao mampizara sy mandefa fampielezan-kevitra amin'izy ireo, sady mitantana ny fifandraisanao tsara kokoa ary mampifanaraka ireo metatra amin'ny antony manosika ny mpamandrika.
Hamarino tsara fa manana ny tahirin-kevitra singa mifangaro amin'ny CRM anao ary ampifandraisina amin'ny sehatra marketing mba hamoronana, hanaingoana ary handefasana any amin'ny lasibatra fizarana ao anatin'ny lisitrao.
Manolora a master unsubscribe amin'ny ambaratonga kaonty ary koa raha misy mpanjifa maniry ny hiala amin'ny serasera mifandraika amin'ny varotra rehetra.
Manampia fanambarana fa mbola halefa ilay nahazo transactional fifandraisana (fanamafisana ny fividianana, fanamafisana ny fandefasana sns).
Ampidiro ny politika fiarovana fiainan'olona miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fampiasana angona ao amin'ny pejy tianao.
Ampidiro fanampiny fantsona ny serasera, toy ny forum ho an'ny vondrom-piarahamonina, fanairana SMS, ary pejy media sosialy hanaraka.
Amin'ny alàlan'ny fandrafetana sy fampiasana lisitra, fizarana ary fampielezan-kevitra mifanaraka amin'ny tokony ho izy, tsy ho voatananao ho madio sy voalamina ihany ny sehatr'asa mpamatsy tolotra mailaka anao, afaka manatsara ny traikefa ho an'ny mpanjifanao ho an'ireo misoratra anarana koa ianao.
Tags: fampielezan-kevitraCRMmetatra mailakampamatsy tolotra mailakaListsrahona marketingsalesforcepejy famandrihana